लमजुङका कैदी–बन्दीको चिन्ता– रातभर उडुस मार्ने कि सुत्ने ? | Janprabhabnews
लमजुङका कैदी–बन्दीको चिन्ता– रातभर उडुस मार्ने कि सुत्ने ?
लमजुङ,फागुन ९ गते आइतबार ।।
लमजुङको बेंसीशहर नगरपालिका वडा नम्बर – ८ स्थित जिल्ला कारागारका कैदीबन्दीले कष्टपूर्ण रुपमा बस्नुपरेको गुनासो गरेका छन् । पुरानो संरचना र क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दीले बसाइ कष्टपूर्ण बनेको उनीहरुले बताएका हुन् ।
कारागारमा हाल ८० पुरुष र ११ महिला गरी ९१ जना कैन्दीबन्दी छन् । जब कि कारागारको क्षमता २५ पुरुष र १० महिला गरी ३५ जना हो । कैदीमध्ये बढी जबर्जस्ती करणी उद्योग, कर्तव्य ज्यान मुद्दाका छन् । कारागारका भवन जीर्ण भएका छन् भने चिसो भुइँमा र शौचालय जाने बाटोसम्मै सुत्नुपर्ने बाध्यता छ ।
खान, बस्न, सुत्नदेखि शौचालय जानसमेत उनीहरूलाई कठिन भइरहेको छ ।‘पुस माघको समयमा हामीलाई सुत्न बस्नलाई नै समस्या भइरहेको छ । तल भुइँबाट सिमेन्टको चिसो आउने गर्दछ,’ कैदी सुवास रानाभाटले भने, ‘सिमेन्टको चिसो दिउँसो घाम लाग्दा पनि ओभानो हुँदैन । रातमा त बढी नै चिसो हुने र बिहान कतिबेला घाम लाग्ला र बाहिर घाम ताप्न पाइला भन्दै रात कटाउने गरिएको छ ।’ गर्मी मौसममा त झन् बढी समस्या हुने गरेको उनको भनाइ छ ।
गर्मीले उकुसमुकुस बनाउने, कारागारको पर्खालदेखि सुत्ने ठाउँको भवन जीर्ण भएकाले कतिबेला भत्किएर ज्यान लिन्छ कि भन्ने डरैडरमा कैदीबन्दी छन् । पानी कम हुँदा सरसफाइसमेत राम्रोसँग गर्न नपाएको कैदीबन्दी सुनाउँछन् ।
यो कारागार २०२८ सालमा बनेको हो । कारागारको क्षेत्रफल चार रोपनी छ । संख्याका आधारमा कारागारका लागि आठ रोपनी क्षेत्रफल आवश्यक पर्ने कारागारका सूचना अधिकृत रमेश विकको भनाइ छ । उनले सम्बन्धित ठाउँमा समस्याको समाधान गर्न पहल गरिरहेको बताए ।
नयाँ भवन बनाउन प्राविधिक परीक्षण भए पनि थप काम अघि बढ्न नसकेको कारागार कार्यालयले जानकारी दिएको छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनिलकुमार शाहीले क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी र पुरानो संरचना हुँदा धेरै समस्या भएको बताए ।
दिनहँु कैदीबन्दी थपिँदै जाँदा नयाँ भवन निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि नयाँ भवन उपलब्ध हुन नसक्दा विभिन्न समस्या भइरहेको उनले जानकारी दिए । यस्तो संरचनामा कैदीबन्दी राख्दा उनीहरुको मनोबलसमेत गिर्ने भएकाले कारागार व्यवस्थापन विभागमा लेखापढी गरेर आवश्यक पहल गर्न अनुरोध गरिएको भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।